Iimveliso ze-TSL zibonisa ii-IP zoLawulo lweXesha kunye neDemo yeTekhnoloji yeNMOS kwi-IBC 2019 | Iindaba ze-NAB | I-2020 I-NAB bonisa i-Media Partner kunye noMvelisi we-NAB BONISA LIVE. Iindaba zeeNjineli zoSasazo
Ikhaya » iindaba » Iimveliso ze-TSL zibonisa ii-IP zoLawulo lweXesha kunye neDemo yeTekhnoloji yeNMOS kwi-IBC 2019
Iimveliso ze-TSL zibonisa ii-IP zoLawulo lweXesha kunye neDemo yeTekhnoloji yeNMOS kwi-IBC 2019
AMSTERDAM, SEPTEMBA 5, 2019 -Ukusebenzisana kuhlala kuhlala kuphambili njengoshintsho kushishino ngokuhamba komsebenzi okusekwe kwi-IP. Kuba TSL iimveliso, uyilo olukhokelayo kunye nomvelisi wezisombululo zokuhamba komsebenzi, isebenzise ulwazi lwayo olunzulu lolawulo lwenkqubo ukujongana nale mfuno ivelayo. Kwi-IBC 2019 (Yima 10.B41), I-TSL iya kubonisa ukucinga kwayo malunga nolawulo kunye nolawulo kuthungelwano lwe-ST-2110 IP ekukhanyiseleni umsebenzi osele wenziwe njengamalungu e-AMWA NMOS inyathelo. I-TSL iya kubonakalisa uhlaziyo kwiinkqubo zayo zokulawula inkqubo yemveliso yosasazo lwentengiso ukongeza kuluhlu olwandisiweyo lolawulo lwendalo iphela kunye neenkqubo zokubonisa.
"Ukongeza ekuboniseni imigca yemveliso yethu, sikwabambe umboniso wobugcisa kwindawo yethu ejonga ukufunyanwa kwesixhobo kunye nokubhaliswa, uqhagamshelo ngesixhobo kunye nolawulo, umcimbi kunye nolawulo lobuhlanga," utshilo uMark Davies, uMlawuli weMveliso kunye neTekhnoloji kwi Products TSL. "Siza kube sibonisa indlela izisombululo zethu zolawulo ezingena ngayo kwizicelo eziphambili kwithotho losasazo, sivumela iingxoxo ezinzulu kunye nabathengi ngendlela abanokwakha ngayo i-ecosystem evumela ukuba igcine ubumnini beenkqubo."
I-TSL iya kubonisa imisebenzi emitsha eyahlukeneyo yolawulo njengenxalenye yeenkqubo zayo zolawulo oluphambili kulawulo lwe-mater, ukudlala nogqithiso. Olu hlaziyo lubandakanya ukudityaniswa kwe-MOS kunye ne-ENPS kunye neeNews ukuze kwenziwe lula ukwenziwa kwegumbi lendaba ngokuvumela abasebenzisi ukuba bathathe ulawulo lwezixhobo ezibalulekileyo abaxhomekeke kuzo. Kwizinto zokudlala ezenzekelayo, abathengi ngoku banokubiza iindleko ngokukuko kwaye ngokulula benze ii-system zokuqala okanye i-backup / tertiary automation, ezinolawulo olulula noluthembekileyo kwizixhobo zevidiyo kunye nemifanekiso yokudlala yenkqubo. Ukongeza, abasebenzisi ngoku banokulawula, ukutshintsha nokusasaza imiyalelo ye-SCTE ngesandla okanye ngolawulo oluzenzekelayo ngokubek'esweni ixesha kunye nokwaziswa xa umcimbi usenzeka.
Okokugqibela, ukongezwa kokudlula kunye nokulawula indlela, kuthetha ukuba abathengi banokwabela ukufikelela kunye nokulawula ukudlala kunye nezixhobo zokusebenza njengoko kufuneka phakathi kwamagumbi okulawula amaninzi ukwenza ulwakhiwo oluhlengahlengiswayo kakhulu, olunokubekeka nolungelelwanayo, ngelixa kusasazwa ulawulo olukhethekileyo ngokweshedyuli okanye ibango.
Ukuqalisa i-IBC 2019, kuluhlu lweendawo ezintsha zolawulo kunye neendlela ezinqamlezileyo, kubandakanya iPD Buddy ye-IP yokulawula kunye nomgca wayo weeBhokisi zeNqaku leNqaku. Ukulawulwa kwe-IP ye-TSL ye-TSL yinkqubo enamandla kodwa eyinkimbinkimbi elawula nayiphi na i-GPI / O-, eyiSibini- kunye nesixhobo esenziwe nge-IP. Ukuphawula ukusuka kwelinye ukuya kumaqhosha amane, i-IP control Buddy inokwenza imisebenzi elula 'kwi / off' -itayile okanye ibangele isalvos entsonkothileyo, kwaye ubungakanani bayo bekhomputha buyenza ifaneleke imathiriyeli yeflaya yokubaleka kunye nemveliso yokushicilela ngokukhawuleza.
Uluhlu lwenkampani yeeBhokisi zeeNdawo eziPhakathi (i-AIBs) yenzelwe ngokukodwa i-A / V, unomathotholo, amashishini kunye nethelevishini yosasazo lweentengiso, kwaye ivumela abasebenzisi ukuba bangene kwiindlela zenkqubo kwaye bafezekise ukusebenza ngokugqibeleleyo ngaphandle kokwenza nayiphi na inkqubo. Ukulawulwa kwesixhobo kunye nokuguquguquka kokusebenza, uchungechunge lwe-AIB lubonelela ukuya kwi-16 GPI / Os kunye neendlela zokulawula izixhobo ezininzi, kunye ne-AIB-4 ikwabonelela nge-Ethernet, i-2-indlela ye-DTMF kunye nemodi yokudayela-up. Ii-AIBs zithutha ii-GPI kunye nee-on-Air tallies ziye ebaleni, naphi na apho uzifuna khona - kuyo yonke iidolophu, imimandla kunye namazwekazi - ukude. Isimo salo naluphi na ulawulo kunye nokujonga esweni kwenziwa lula ngesikhangeli sewebhu 'senkqubo-engenasimahla'.
I-TSL ikwabonelela ngemigangatho yolawulo esekwe kwisoftware evumela abasasazi ukuba babone ukugeleza komsebenzi wabo kunye nokuzisa yonke imisebenzi ephambili ibe yinto encomekayo kwaye kulula ukuyigcina imbonakalo. Abasebenzisi beePhaneli zeVirtual banokugcina iinkqubo zabo ngoqeqesho oluncinci, ngokulula ukumisela ukusetyenzwa kolawulo olupheleleyo lwe studio, iipaneli zokuhamba, ukuhamba komqondiso kunye namagama emithombo.
Okwangoku, iFlashBoard, inkqubo esekwe kwiscreen sobuchwepheshe, inceda ukulungelelanisa imisebenzi esetyenziselwa indawo yonke ekwabelaneni ngolwazi. I-TSL yaqonda ukwanda kwabathengi isidingo sokubona ulwazi lokuhambahamba ngokubalulekileyo kwaye iye yaqulunqa iFlashBoard ukuba idibanise ngaphandle komthungo kunye ne-TSL okanye nayiphi na enye inkqubo yolawulo lomntu wesithathu. Kwi-IBC, i-TSL iya kubonisa ukongezwa kweempawu ezininzi kunxibelelwano lweFlashBoard, kubandakanya inkqubo eyandisiweyo kunye neewotshi zehlabathi, amaxesha aphezulu emveliso, isibane esibhakabhakeni kunye nesibonakaliso sokukhanya, uphawu lwesikrini, umxholo wewebhu osekwe kwiwebhu kunye neethayile zevidiyo.
"Sizabalazela ukuseka ukusebenzisana okungenasiphelo nazo zonke izisombululo zethu zolawulo, nokuba abathengi basebenzisa iimveliso zethu ngokukodwa okanye bazidibanisa kwiinkqubo ezinkulu zecandelo lesithathu," wongeza uDavies. "Uluhlu lweendawo zethu zokunxibelelana zenza amaqela emveliso ukuba asebenzise izisombululo zokuhamba komsebenzi ezingabizi kakhulu kwaye zigcwele ngokusebenza kunye nokuthobela izicelo ezizodwa kwizisombululo zeshishini."
malunga Products TSL
Ngaphezulu kweminyaka engama-30, i-TSL isebenze ngokuthe ngqo kunye nabasasazi abakhokelayo kunye nabenzi bemxholo ukuyila, ukuvelisa kunye nokuthengisa uluhlu lwezisombululo zokusasazwa kokuhamba komsebenzi ezenza lula ukusebenza kusasazo lukamabonakude, intambo, Sathelethi, IPTV kunye namashishini e-IT. Ingcali kulawulo lweaudio, iinkqubo zolawulo losasazo kunye nolawulo lwamandla, i-TSL iqinisekisa ukuba izisombululo zayo ziyanelisa kwaye zigqithise kwiimfuno zorhwebo, ezobuchwephesha kunye nokusebenza okukhoyo ngokusekwe kwi-IT kunye nokusebenza kwendabuko ukunceda abathengi bayo kwehlise iindleko, ukuvelisa ingeniso kunye nokwenza lula imisebenzi.
Isisombululo Sokusasazwa Injineli yokusasaza Ukusasazwa kwezobunjineli Inkqubo yoLawulo UGraham Chapman uVikelelwa kuMhleli IBC ukudityaniswa Iilori zangaphandle ezisasazwayo Imikhonto kunye neentolo Umxholo ophantsi i-subtitling, i-Digital Nirvana, uhlolo lweendaba, IBC I-TSL FlashBoard Products TSL BuTeknoloji TVU Networks I-Ultra HD Forum Injini yeVidiyo 2019-09-05
Previous: Iilebhu ze-GB ziqinisekisa ukudityaniswa kwe-NDI
next: I-IBC2019: IiTVU Iinethiwekhi zeTVU Zinceda abasasazi baZise uMxholo oChaziweyo kubabukeli ngokuSebenza ngokuSebenza ngeBanga.